Tunç Soyer မှ Izmir သို့လာသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အံ့အားသင့်စရာ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirအဆိုပါ Izmir တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရောက်ရှိထံမှTunç Soyer အံ့အားသင့်
21 / 08 / 2019 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Izmir ကနေကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှအံ့အားသင့်ထံမှ Soyer tunc
Izmir အတွက် Izmir အတွက်မြို့ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှလာမယ့်လူငယ်များစာရင်းသွင်းဖို့အနိုင်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာအမည်အားကြိုဆိုခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကတဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer လူငယ်စေတနာ့ဝန်ထမ်း '' ကြိုဆိုအတူ Izmir သစ်နေထိုင်သူများ outgoing, နံနကျ, ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံများတွင် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer လေ့လာဖို့အခြားမြို့များကနေ Izmir မှလာမယ့်ဆယ်ကျော်သက်တက္ကသိုလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခဲ့ကြသည်ငယ်ရွယ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ့ဆုံရန်စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့်အတူ "ဒါဟာရင်ခွင် Izmir လူငယ်စီးဆင်း" ရှေ့တော်၌ထိုတစ်နေ့တာ၏ပထမဦးဆုံးရောင်ခြည်နှင့်အတူ Izmir ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်, Soyer တတ်၏။ လက်ဖက်ရည်သောက်စကားများသောနိုင်ငံတော်သမ္မတ Soyer တစ်ကြာချိန်နှင့်အတူတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများ, နောက်ပိုင်းတွင်အသင်းအလုပ်အစည်းအဝေးဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Izmir အတွက်တက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းအပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများဘတ်စ်ကားကနေဆင်းကြဘူးသူတို့တဘက်၌နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer ၏မျက်မှောက်မှာသူတို့ရဲ့မိန်းမောတွေဝေမကွယ်နိုင်။
မြူနီစီပယ်, ခရိုင်မြူနီစီပယ်, အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် Izmir မြို့တော်စီမံကိန်းကိုမြို့ပြလူငယ်များ Izmir ထံသို့ လာ. မွို့၌အသက်တာကိုသူတို့၏မြို့ပြနှင့်လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဟာသဟဇာတဖြစ်စဉ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်အားပေးအားမြှောက် "Izmir လူငယ်ရင်ခွင်ဖွင့်လှစ်" ။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer "Izmir လူငယ်ရင်ခွင်ဖွင့်လှစ်" စီမံကိန်းကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ယခုအချိန်တွင်ချိုးဖျောလူငယ်များကိုကျေးဇူးတင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာသူမသူတို့၏ရွယ်တူချင်းတွေ့ဆုံရန်တယ်, မကျြနှာကိုရယ်မောသောကြောင့်သူတို့ထဲက "တခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းတဝင်မရှိသောအရပ်မှလာကြ၏။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့, အလွန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ Izmir များ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးကအလွန်ကောင်းတဲ့စတင်မှု။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, Izmir ကောလိပ်များ၏အများဆုံးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းမြို့များကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ငယ်ရွယ် Izmir ဤမျှဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ် "ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများကသူသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Soyer ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစဉ်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူမိမိတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 19 လယ်ပြင် "Izmir လူငယ်ရင်ခွင်ဖွင့်လှစ်" စီမံကိန်းကတည်းကစေတနာ့ဝန်ထမ်းနံနက်ယံ၏ပထမဦးဆုံးရောင်ခြည်နှင့်အတူဘတ်စ်ကားကနေဆငျးသလူငယ်များနှင့်မိသားစုများကူညီနေတာပါ။ ပူပြင်းတဲ့ဟင်းချိုကျောင်းသားများကိုအတွက်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့မြို့ပြနှင့်အစပျိုးစီမံကိန်းများမှသစ်ကိုဒေသခံများကများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျှော့ချရန်တက္ကသိုလ်ပြင်ပမှမှတ်တမ်းများမှ Izmir, လက်ဖက်ရည်နှင့် savory ရယူထားသောနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ပို့ဆောင်အခမဲ့လွန်းအတူအိမ်ရာနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ စံချိန်တင်အတွက်သတင်းအချက်အလက်စားပွဲပေါ်မှာအဆိုပါတက္ကသိုလ်များတည်ထောင်နှင့်ကျောင်းသားများကိုအိမ်ရာကိစ္စများအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးထားကြသည်။ အခမဲ့ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုန်ဆောင်မှုကိုလည်းပူဇော်ကြသည်ကဲ့သို့သောပုံကြမ်းမြေပုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အိုးအိမ်များနှင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာမှာစောင့်နေကျောင်းသား, ယဉ်ကျေးမှုအချက်တက္ကသိုလ်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ဘရိုရှာပေး။ Project မှ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖြစ်ခေတ်ပြိုင်ဘဝကသူများအသင်း, Aegean ခေတ်ပြိုင်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Urla, Bornova, Buca နှင့်Çiğliထောက်ပံ့မြူနီစီပယ်၏မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်အများပြည်သူတက္ကသိုလ်ပံ့ပိုးသည်။
တင်ဒါကြေငြာချက် - Tavsanli - Tunçbilekလိုင်း L = Tunçbilekမီးရထားဘူတာတွင်လမ်း ၂,၃၁၉ မီတာရှိသည်။
Tunç Soyer သည်Narlıdereမြေအောက်ရထား၏ပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Tunç Soyer နေ့က 100 ပြုလေ၏ဘာလဲ?
Tunç Soyer İZBETONနှင့် Izel ငွေကြေးအလုပ်သမားများနှင့်အတူBayramlaşmasıခဲ့သည်
Izdemir သန်းခရီးသည်အံ့အားသင့်စရာပွဲအခမ်းအနားကနေ 16
အဆိုပါ Izmir ကူးတို့စာအုပ်ရဲ့ buddy ဖို့အံ့အားသင့်စရာ
ဒါဟာရင်ခွင် Izmir Young ကစီးဆင်း
RayHaber 21.08.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ